WHO ma oggolaan doonto tallaalka Ruushka ee COVID-19 ee ku saabsan xadgudubyada wax-soo-saarka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » WHO ma oggolaan doonto tallaalka Ruushka ee COVID-19 ee ku saabsan xadgudubyada wax-soo-saarka
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Ruushka • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
WHO ayaa hore u sheegtay inay heshay xad -gudubyo badan waxayna leedahay walaacyo la xiriira “hirgelinta tillaabooyin ku filan si loo yareeyo halista wasakheynta iskutallaabta” ee warshadda Pharmstandard ee magaalada Ufa ee Ruushka.
Ururka Caafimaadka Adduunka wuxuu joojiyay oggolaanshaha degdegga ah ee tallaalka Sputnik V COVID-19 ee Ruushku sameeyay.
HO waxay ka heshay xad -gudubyo wax -soo -saar badan warshadda wax -soo -saarka ee Ufa, Russia.
Kormeer cusub oo xarunta ah ayaa loo baahan doonaa ka hor inta aan oggolaansho degdeg ah la siin, ayay tiri WHO.
Kaaliyaha Agaasimaha Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) Jarbas Barbosa ayaa ku dhawaaqay in dalabkii Ruushka ee oggolaanshaha deg-degga ah ee tallaalka Sputnik V COVID-19 ay hay’addu joojisay ka dib markii la helay xad-gudubyo badan oo wax-soo-saar intii lagu jiray kormeerkii WHO ee Russia.
Kaaliyaha Agaasimaha Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) Jarbas Barbosa
Intii lagu guda jiray shir jaraa'id oo ay qabanayeen Ururka Caafimaadka Ameerika ee Pan American, oo ah laanta gobolka ee WHO, Barbosa wuxuu sheegay in geedi socodkii oggolaanshaha degdegga ah la hakiyay ilaa baaritaan cusub oo lagu sameeyo ugu yaraan hal warshad oo Ruush ah oo soo saarta tallaalka.
“Geedi socodka loogu talagalay Sputnik VLiiska adeegsiga deg -degga ah (EUL) waa la joojiyay maxaa yeelay markii ay kormeerayeen mid ka mid ah geedaha tallaalka lagu farsameeyo, waxay ogaadeen in warshaddu aysan waafaqsanayn hababka wax -soo -saarka ugu wanaagsan, ”ayuu yiri Barbosa.
Ka dib markii la daabacay natiijooyinka WHO, warshaddu waxay sheegtay inay mar hore wax ka qabatay walaacooda iyo in kormeerayaashu aysan su'aal ka qabin badbaadada ama waxtarnimada tallaalka. Laakiin, sida laga soo xigtay saynisyahanno madax -bannaan iyo dadka u dhuun -daloola warshadaha, jebinta wax -soo -saarku waxay dhaawici kartaa tayada tallaalka.
The Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa sheegay inay wali ka war sugayso Farmandardard waxayna soo jeedisay in baaritaanno cusub oo tas -hiilaadka loo baahdo ka hor inta aysan WHO oggolaanin Sputnik V.
“Soo -saaruhu wuxuu u baahan yahay inuu tan ku qaato talo -bixin, uu sameeyo isbeddellada lagama maarmaanka ah, una diyaar -garoobo baaritaanno cusub. WHO waxay ka sugeysaa soo -saaraha inuu soo diro war ku saabsan in warshadoodu ay tahay mid ku habboon, ”ayuu yiri Barbosa.
Ruushku wuxuu gudbiyay codsiyadiisa oggolaanshaha labada WHO iyo Wakaaladda Daawooyinka Yurub (EMA) bishii Febraayo.
Laakiin dalabku wuxuu la kulmay dhibaatooyin badan.
Labaduba Wakaaladda Daawooyinka Yurub (EMA) iyo WHO waxay sheegeen usbuucii hore inay wali ka sugayaan “xog dhammaystiran” oo ka socota soosaarayaasha Sputnik V.
Helitaanka oggolaanshaha labada ururba aad bay muhiim ugu tahay Ruushka, oo bilaabay olole diblomaasiyadeed oo tallaal ah oo malaayiin qiyaasood ka iibiyey daraasiin dalal. Waxay sidoo kale u gogol xaaraysaa suurtogalnimada is-aqoonsiga tallaallada, fududeynta safarka musiibada ka dib ee loogu talagay Ruushka Sputnik V.